Yetatu-bato Instagram maapplication ari kuvhara | IPhone nhau
Yetatu-bato Instagram maapplication ari kumira kushanda
Parizvino yepamutemo Instagram application ndiyo yega inotibvumidza kuisa ese mapikicha uye mavhidhiyo kune Facebook foto social network. Instagram mutemo haibvumire chero application, ingave desktop kana nharembozha, kuti ishandiswe kugadzirisa yedu account. Asi Instagram inoita inotibvumidza kushandisa yechitatu-bato kunyorera kubvunza account yedu, zvirinani kusvika nezuro. Kana iwe ukashandisa chero eapo maapplication anowanikwa muApp Store kuti ubvunze yedu Instagram account uye uri kusangana nematambudziko, hausi iwe wega. Wakanyarara. Asi iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti iwe uchafanirwa kurega kuzvishandisa nekuti Instagram yadzima pombi pane aya marudzi emaapp.
Iyo yakaoma Policy yekushandiswa kweiyo Instagram API yatanga kushanda nhasi uye mazhinji emaapps ari kupaza. Ini ndashanyira akati wandei mapeji ewebhu evakagadziri vechitatu-bato kunyorera uye muFastFeed isu tinogona kuverenga:
Instagram yaita shanduko yakakosha mudanho rekushandisa kweiyo API chikuva chechitatu mapato. Kubva munaJune 2016, Instagram haibvumire yechitatu-bato kunyorera kuongorora iyo Instagram account. Nehurombo chikumbiro chedu hachina kusara uye chakamira kushanda muna Chikumi 1.
Asi haasi iye oga akataura kusagadzikana kwake. Pasina kuenda kumberi, mugadziri we Gramfeed yabvisa iyo application kubva kuApp Store zvakanyanya seMixagram, sezvo yakamira zvakare kushanda muna Chikumi 1, apo iyo nyowani Instagram API mutemo yakatanga kushanda.
Sezvo isu tichigona kuverenga pane iyo Instagram yekuvandudza webhusaiti, vese vanogadzira avo vanoda kushandisa yepamutemo API inofanira kukumbira mvumo yekuti chikumbiro chavo chiongororwe isati yatumirwa kuti inogamuchirwa muchitoro chekushandisa. Hapana mubvunzo kuti zano re Instagram nderekupedzisa ese echitatu-bato kunyorera kwemafuratifomu mapuratifomu, asi zvakare yadzima pombi pazvikumbiro zveMac neWindows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Yetatu-bato Instagram maapplication ari kumira kushanda
Saka kuti vavandudze iyo instagram app
Pindura kuna Braulio
Uye chii chiri kuitika kuwebhusaiti yako? ...
iTunes inosvika vhezheni 12.4.1 kugadzirisa matambudziko akati wandei
Apple inogona kudzivirira mubhadharo wemadhora mazana mashanu nemakumi matatu nematatu ekutyorwa kwepatent